Nanjary Niova Ho Mahery Vaika Sy Masiaka Ny Fomba Sinoa Enti-manao Sivana : ‘Ny Great Cannon’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2015 3:06 GMT
Citizen Lab, izay foibem-pikarohana tena raitra momba ny zon’olombelona, misahana ny mikasika ny sehatry ny Teknolojian’ny Filazam-baovao sy ny Serasera ao amin’ny Oniversiten’i Toronto, dia nahamarika fa ny foto-drafitrasan’ireo fanafihana DDoS “rangahy-eo-afovoany” atao amin’ny sehatra “hub” Shinoa malalaka, GitHub, dia miray toerana amin’ny Great Firewall. Citizen Lab dia niantso io zava-baovao ara-teknolojika io hoe ”Great Cannon”.
Midika izany fahatsapana izany fa nanjary niova endrika mahery vaika sy masiaka ny fomba Shinoa fanaovana sivana.Tsy hoe nanakana ny votoaty avy any ampitan-dranomasina hiditra akory ny Great Cannon, izay afaka manao izany, fa aleony “mikirakira sy manao fitaovana ny fifamoivoizan’ireo rafitra ‘sendra-mba-teo’ ivelan’i Shina, ary manomana mangingina ireo fitety ao aminy hanao fanafihana DDoS goavana”. Nanamafy ny Citizen Lab fa mitovy tsy misy valaka amin’ny rafitra QUANTUM an'ny NSA ny Great Cannon, izay mahavita “mikendry ireo solosaina any ivelany rehetra ka mifandray amin’ireo Tranonkala miorina any Shina ary tsy mampiasa tanteraka ny HTTPS”.
Lasibatry ny sivann'ny manampahefana Shinoa ny GitHub nanomboka tamin’ny taona 2013. Noho ny maha sehatra fampiantranoana misokatra azy, dia nampiantrano fitaovana sy votoaty mpanohitra an-tserasera, izay tadiavin’ny manampahefana Shinoa ho sakanana ny GitHub. Raha ny marina anefa dia nikatso tanteraka nandritry ny fotoana fohy ilay sehatra ny volana janoary 2013 noho ny fanamboarana ny “HTTPS”-ny azy ihany, izay mahatonga ny Great Firewall tsy ho afa-nanakana ireo pejy manokan’ny tsirairay, toa ny an’ny tetikasa Mongol, fitaovana loharano misokatra nampiantranoin’i GitHub izay mitsakaraka ny toerana misy ny Great Firewall. Tsy naharitra ela ny fikatsoana tamin’ny taona 2013 satria nisy fiantraikany teo amin’ireo fotodrafitrasan’ny loharano misokatra izany, izay tena zava-dehibe ho an’ireo mpandraharaha hafa.
Ireo tetika nentina nialàna ny Great Firewall Shinoa izay nampiantranoan’i GitHub dia nantsoin’ireo mpikaroka avy ao amin’ny Tetikasa momba ny Fitaovana Malalaky ny Aterineto sy ireo tranonkala maro izay nanaraka ny tetika amin’ny famoronana tranonkala fitaratra ary koa nanome ny votoatin’izy ireo ho an’ny mpamaky ao amin’ny kaontinanta Sinoa, hoe “fahafahana mirazotra”.
Navilin’ny Great Cannon shinoa ny fifamoivoizana goavana ho any amin’ny https://github.com/greatfire, ny pejy fandraisan’ny Great Fire, tetikasa iray natokana hialàna ny sivana ataon’ny Great Firewall amin’ny fampiantranoana ny tranonkala fitaratr’ireo votoaty voarara, anisan’izany ny New York Times, China Digital Times, Boxun, Free Weibo Project sy ny maro hafa koa. Inoana marimarina fa ny antony nanaovana ilay fanafihana dia mba hanerena ny GitHub hanala ireo pejy ireo.
Taty aoriana, maromaro ny tatitra ara-teknika nanazava fa avy amina fitaovana iray karazan’ny “sendra-mba-teo” ilay fanafihana izay mipaingotra ireo fangatahana tranonkala avy amin’ny toeran-kafa maneran-tany mba halefa ho hadihadiana any amin’ny Baidu, milim-pikarohana lehibe indrindra ao Shina.
Baidu, izay voasoratra ao anatin’ny lisitry ny tsenm-pifanakalozana ao Etazonia, dia nandà ny fandraisany anjara tamin’ilay fanafihana, ka mamela ny olona hanontany tena momba izay mety ho andraikitry ny sivana shinoa tamin’iny fanafihana iny.